Miresaha momba ny porofo ara-baiboly 6 an'ny Vavolombelon'i Jehovah
Fivavahana & Spirituality Kristianisma
Resaho ny porofo 6 momba ny Fikambanana Tilikambo Fiambenana sy ny Vavolombelon'i Jehovah
by Isaac J. Harris
Manaporofo ny Fivavahana Marina ve ny Vavolombelon'i Jehovah?
Ny Tilikambo Fiambenana ho an'ny Fandikan-tenin'ny Fikambanana Ny Tilikambo Fiambenana no milaza fa io no fivavahana tokana tena izy, arakaraka ny fepetra ara-baiboly enina monja. Mba hahatonga izany ho zavatra marina, fa tsy finoana matanjaka, ny porofo ara-baiboly ara-tsosialin'ny Fikambanana dia tsy maintsy mazava tsara ary tsy mamela toerana hisalasalana. Tsy maintsy manondro ny Fikambanana Tilikambo Fiambenana izy ireo ary ny Fikambanana Tilikambo Fiambenana ihany .
Ireto manaraka ireto dia voasoratra ao amin'ny Toko faha-15 ("Fivavahana Takin'Andriamanitra") ao amin'ilay boky hoe "Inona Marina no Ampianarin'ny Baiboly?" araka ny navoakan'ny Fikambanana Tilikambo Fiambenana ho an'ny Baiboly sy tamin'ny 2005.
1. Ny mpanompon'Andriamanitra dia mametraka ny fampianarany ao amin'ny Baiboly (2 Timoty 3: 16-17, 1 Tesaloniana 2:13)
Ho an'ny ankamaroan'ny Kristianina, azo atao izany. Ny Kristiana anefa no mampiasa ny Baiboly, ary misy fiangonana mihoatra ny 1500 ao Etazonia irery ihany. Ahoana no ahafahan'io fepetra takina io hampitombo ny safidy ataontsika amin'ny fomba mahasoa? Azo inoana fa tokony hankasitraka ny fivavahana iray isika, izay ampianarin'ny ankamaroan'ny Baiboly ny fampianarany, nefa tsy misy olona afaka manaiky azy io. Raha marina ny fanalahidy dia azontsika atao ny mampitombo ny safidintsika amin'ireo fivavahana izay efa tsy niova nandritra ny taona ny fampianarany. Na izany na tsy izany, ny fiovan'ny fotodrafitrasa lehibe rehetra dia manondro fa diso ny fandikana teo aloha ary ny fikambanana dia nanaraka ny fandikana diso raha tsy efa vita ny fanovana.
Satria ny Fikambanana dia malaza amin'ny fanovana matetika ao amin'ny foto-pampianarana, dia toa miteraka fisalasalana izany amin'ny maha-hany fivavahana marina azy ireo.
Na manaiky an'io teboka farany io izy ireo na tsia, dia tsy dia misy dikany loatra io fepetra io raha ny tena izy.
2. Ireo izay mampihatra ny fivavahana marina dia mivavaka amin'i Jehovah ary mampahafantatra ny anarany ( Matio 4:10, Jaona 17: 6)
Fivavahana kristianina maro no manompo an 'Andriamanitra (Jehovah) ary mampahafantatra ny anarany amin'ny alàlan'ny varavarana na varavarana hafa.
Na dia mampiasa ny anarana hoe Jehovah aza ny Vavolombelon'i Jehovah mba hamantarana ny finoany, dia toa tsy manondro ny fikambanana Ny Tilikambo Fiambenana ho an'ny Baiboly sy ny Tranok'alan'i Afrika, fa tsy ny fivavahana hafa.
3. Ny vahoakan'Andriamanitra dia maneho fitiavana marina sy tsy misy fitiavan-tena (Jaona 13:35)
Misy fomba maro ahafahana mampiseho an'io "tena fitiavana sy tsy tia tena" io. Ny iray amin'ireo ohatra tena tiany amin'ny Tilikambo Fiambenana dia ny fandàvany ny hiady amin'ny tafika mitam-piadiana. Milaza izy ireo fa misy kristiana mety hampidi-doza ny Kristianina hafa amin'ny fifampiraharahana ara-tafika. (Jereo ny toko faha-15 amin'ny hoe "Inona Marina no Ampianarin'ny Baiboly?") Tsy ny Vavolombelon'i Jehovah ihany anefa no tsy mety miady amin'ny ady eo amin'ny firenena, ary izany no hany fomba hanehoana fitiavana. Ny fiantrana am-pitiavana sy ny ezaka fanavakavahana dia ohatra amin'ny fitiavana kristianina. Maro ihany koa no miady hevitra fa ny fampiharana ny fandroahana (miontana sy mangatsiaka) dia tsy misy dikany firy. Ny fandroahana dia manimba fianakaviana ary mety hampidi-doza ho an'ireo Vavolombelona efa mijaly amin'ny fahaketrahana ara-pahasalamana.
4. Ny Kristianina marina dia manaiky an'i Jesosy Kristy ho fitaovana ampiasan'Andriamanitra (Asa 4:12)
Ny ankamaroan'ny antokom-pinoana kristianina dia mahafeno izany fepetra izany.
5. Tsy anisan'izao tontolo izao ny mpivavaka marina (Jaona 18:36)
Inona no mitarika io porofo ara-baiboly io?
Ny kristiana dia tsy afaka ny hiaina amin'ny toerana malalaka. Mino ny fiaraha-monina fa ny hoe "tsy anisan'izao tontolo izao" dia midika fa ny Vavolombelon'i Jehovah dia tokony hisoroka ny fisaraham-bazana politika na mitady "fahafinaretana eran-tany" sy hatsaran-toetra . Saingy ny fandikana iray ihany, iray izay manohana ny antokom-pivavahana maro hafa. Ny sasany mahatsapa fa ampy ny fitsipika ara-baiboly momba ny "olona" eto amin'izao tontolo izao, ka ny ankamaroan'ny antokom-pinoana dia mety hahafeno fepetra. Ny hafa, toa ireo finoana anabatista, dia mbola lavitra kokoa noho ny Fikambanana Tilikambo Fiambenana amin'ny alalan'ny fitokanana ny tenany ho vondrona madinika. Na ahoana na ahoana fomba andikanao an'io, dia tsy manavaka ny Vavolombelon'i Jehovah eo ambony vondrona hafa.
6. Manambara ny tena mpanara-dia an'i Jesosy fa ny Fanjakan'Andriamanitra no hany fanantenana ho an'ny olombelona (Matio 24:14)
Ny Fikambanana dia milaza fa ny fanompoany isan-trano dia fanatanterahana izany fepetra izany, saingy tsy irery izy ireo.
Ny Môrmôna, ny Christadelphians, ary ny Advantista Mitandrina ny Andro fahafito dia anisan'ireo izay manao ezaka toy izany. Ankoatra izany, ny Fiangonana Katôlika sy ny antokom-pivavahana Protestanta hafa dia nahatonga olona niova fo nandritra ny taonjato maro talohan'ny nahitana ny Fikambanana Tilikambo Fiambenana. Olona maro no lasa Kristiana noho ireo misiônera ireo.
Ny fanambarana matetika ataon'ny Vavolombelon'i Jehovah dia ny fankahalan'izao tontolo izao ny vahoakan'Andriamanitra. Ankoatra izany, ny azy ireo dia tsy ilay finoana tokana hanenjehana ny fanenjehana. Fiangonana maro no mankahala, na ankehitriny na taloha. Maro amin'ireo protestanta malaza no milaza fa enjehina na dia anio aza ankehitriny, toy ny Katolika maro. Ny iray dia afaka miady hevitra fa ny Môrmôna sy ny Anabatista dia voakasika lavitra noho ny Vavolombelon'i Jehovah.
Amin'ny farany, sarotra ny milaza zavatra tsy dia mazava loatra fa ireo "porofo" ara-baiboly ireo dia manondro manokana na amin'ny Vavolombelon'i Jehovah.
Rehefa ampiasaina ny Kristianisma mba hanamarinana ny herisetra
Miady hevitra amin'ny Vavolombelon'i Jehovah hoe Fotopampianarana Fototra Foana
Inona no atao hoe Donatasy ary inona no inoan'ny mponin'i Donetsk?
Inona no Crusades?
Ny finoan'ny Filoha teo aloha Barack Obama
Ny Pantheon any Roma: Ny Tantara Aorian'ny Fahaizana Mahatalanjona Nataony
Ny fiantraikan'ny miaramila sy ny politika amin'ny Crusades
Ny Kristianisma sy ny herisetra: ny Crusades
7 Zavatra Tsy Nahalalanao Momba An'i Jesosy
Sary, Diagram, Sarin'ny Pantheon any Roma
Miverina any amin'ny Crusades ankehitriny
Fanohanana fotsy sy kristiana nasionalisma
Overview of Cajun History, Food and Culture
Fomba hahazoana diplaoma amin'ny alalan'ny fanadinana
Fiaramanidina Mivarotra iray
Trangam-panafihana: '16 Ireo olona maty tany anaty fiara fitaterana saribao '
Fandefasana alemà tsara indrindra ho an'ny mpianatra alemà
Ny trondro ra (Finn Actinopterygii)
Inona no dikan'ny "À La Une" amin'ny teny Frantsay?
Inona avy ireo làlana ankavia sy ankavanana?
Teny nalaina mba hampitony ny lehibenao amin'ny andron'ny fankalazana ny Andraikitra
Ny ampahany manokana an'ny John Dillinger ary ny Smithsonian
Cleopatra: Vehivavy mahery
Kalandrieran'ny volana septambra
Superfeet Insoles Product Review
Ny ady tsara indrindra sy ratsy indrindra momba ny fanofanana fototra
Ny milina fitaratra sy ny Revolisiona textile
Fanitsiana zo mitovy
Inona no tokony ho fantatra alohan'ny hividiananao fitaovana amin'ny teny italiana
Ny reniranon'i Sindhu (Indus)
Tavoahangy misy tavoahangy misy afo
Top fahazarana mahasalama
Sacbe - The Ancient Maya Road System
Fantasy Themed Stage Plays